एमालेको ९ महिने संसद अवरोधः रोक्नु र खोल्नुका छैनन् केहि कारण - Everest Dainik - News from Nepal
२०७९, ४ जेष्ठ बुधबार
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ९ महिनासम्मको प्रतिनिधिसभा (संसद)मा जारी अवरोध मंगलबार अन्त्य गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अवरोध खोल्नुको मुख्यत दुई कारण दिएका छन् ।
एक– मुलुक एउटा राजनीतिक कोर्समा गइसकेको छ । दुई– मुलुक संकटतिर धकेलिदै गएको छ यसमाथि संसदमा छलफल होस र सरकारलाई खबरदारी गर्न पाइयोस् । ज्ञवालीले पहिलो कारण लाज छोप्नका लागि मात्रै राखे तर खासै ब्याख्या गरेनन् ।उनले दोस्रो कारणमा भने कारणको पनि कारणहरु केलाउने प्रयास गरे ।
ज्ञवालीकै शब्दमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन र सरकारका कारण महंगी बढेको छ, अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ, विकास खर्च भएको छैन, प्रधानन्यायाधीश, गभर्नर, प्रहरी प्रमुखलगायत व्यक्ति र संस्थामाथि सत्ता गठबन्धनले हस्तक्षेप गरेको छ । यसकारण मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको छ । मुलुकलाई परेको अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले ९ महिनासम्मको जारी संसदको अवरोध अन्त्य गरिएको हो ।
संसदको अवरोध अन्त्य गरिनुको कारण दिएका ज्ञवाली लामो समयसम्म संसद अवरोध गर्दा मुलुकलाई के फाइदा भयो? स्वयं एमाले पार्टीलाई के कति फाइदा भयो ? भन्ने विषयतिर प्रवेश नै गरेनन् ।
एमालेले ९ महिनासम्म संसद अवरोध गर्दा स्वयं पाटीलाई घाटा पुगेको निष्कर्ष निकालेको हुन सक्ने बताउँछन् संसद सचिवालयका एक पूर्व सचिव । एमालेले संसद अवरोध गलत हो भनेर स्वीकार गर्नु मुलुककै हितका लागि लाभदायक हुने उनको विश्लेषण छ । ‘हाउसको गतिविधि बन्द गर्नु गल्ती थियो भनेर एमालेले स्वीकार गर्‍यो । यसका लागि एमालेलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ’ उनले भने ।
करिश्मा ढकाल र रमेश भट्टराईको “रातकी रानी” सार्वजनिक